Deegaanka Oo Maanta Lawareegay Xerada 9aad Ee Ciidanka Qaranka Oo Kutaala Degmada Shiniile Ee Gobolka Sitti. - Cakaara News
Shiniile(CN) Arbaco.22.Oct.2014, Degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta lawareegay xerada wayn ee 9aad ee ciidanka qaranka ee kutaala degmada Shiniile ee dhinaca Diridhawa. Xeradan oo ah dhul aad u balaadhan oo dhan 241 hektaar ayaa horumar ahaan loogu wareejiyay deegaanka.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, Madaxwayne Kuxigeenka ahna Wasiirka Horumarinta Magaalooyinka mudane C/xakiim Cigaal Cumar, masuuliyiin sare oo ciidanka qaranka ah oo uu ugu horeeyo General Tigabu Yilma, qaybta u qaabilsan dhulalka ee heer federal, iyo masuuliyiin heer gobol ah ayaa wareejinayay dhulkan maanta.
Waftigan uu horkacayay madaxwaynuhu ayaa maanta galinkii hore gaadhay xeradaasi laga wareejinayay ciidanka qaranka. Xeradan ayaa kamid ah dhulkii ay horey ciidanku ugu wareejiyeen deegaanka ee ay kamid ahaayeen Qabridahar iyo goobo kale oo deegaanka kamida.
Waxaana maanta sitoos ah deegaanka soomaalida Itoobiya loogu wareejiyay maanta xeradaas ciidanka qaranka oo ah dhul aad u balaadhan islamarkaana horumar loo isticmaali doono.